3GP format waa qaab multimedia kaas oo lagu qeexay mashruuc iskaashi qarnigooda saddexaad u ah. Format waxaa taageersan qaar ka mid ah ciyaartoyda video laakiin tiro yar oo iyaga ka mid dhab ah siiyo qaab ciyaareed wanaagsan. Waa maxay gaar ah oo ku saabsan qaabka ay tani tahay in waxa loo isticmaali karaa on telefoonada gacanta iyo qalabka kale ee taageera shaqeynta 3G, laakiin qaar ka mid ah telefoonada la 2G iyo 4G aad u taageeri shaqeynta this. Waxaa jira masraxyo badan nidaamka qalliinka kala duwan halkaas oo dhan kuwa caan ku dhowaad leedahay fursado badan oo ka mid ah ciyaartoyda 3GP inaad kala soo baxdo. Qaar ka mid ah hababka ka hawlgala waxaa ka mid ah Windows, Mac, macruufka iyo Android. Maqaalkani waxa uu ku tuura Nuur on 30 ciyaaryahan 3GP sare ee ciyaartoydan daaqadaha. Akhri si aad u ogaato.
Qeybta 1: Top 10 ciyaaryahan 3GP for Windows 10
Qeybta 2: Top 10 ciyaaryahan 3GP u Mac
Qeybta 3: Top 5 ciyaartoy 3GP u iPhone / iPad App
Qeybta 4: Top 5 ciyaartoy 3GP u Android app
Windows 10 waa mid ka mid ah nidaamyada hawlgalka si fiican u yaqaan, isku halleeyey, oo caansan dunida iyo waxa uu ka mid inta badan aad laptops, kiniiniyada iyo telefoonada gacanta leeyihiin. Ma jiro dhamaadka ay tirada ciyaartoyda video halkaas oo ay taageeraan qaab 3GP ah. Liiska 10-ka ciyaaryahan ee ugu sareysa 3GP for Windows 10 oo aad ka fiirsan karto dajinta soo socda waa.
VLC Player waa il furan,, miisaanka, ciyaaryahanka 3GP deggan oo dabacsan oo lacag la'aan ah taas oo sida macquulka ah waa fursadaha ugu fiican ee aad qalab daaqadaha.
Waa maxay gaar ah oo ku saabsan waa xaqiiqda in ay tahay mid aad u dabacsan oo customizable in ay isticmaalaan iyo waa fiican ee bilowga ah.
Muuqaal kale oo wanaagsan oo ku saabsan media player tani waa in ay u ciyaara labada HD iyo BluRay.
Waxay leedahay interface aasaasiga ah iyo iminka oo waa default doorasho dadka intooda badan.
Qaabab ay taageerayaan: MPEG, FLV, 3GP, FLAC, RMBV iyo qaabab kale oo badan
Review: "Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay markasta ku guulaysan doonaa halka ciyaartoyda kale sida Windows Media Player iyo Win amp ku fashilmaan. VLC ciyaaryahan warbaahinta ayaa diyaar u ah Windows, Macintosh, iyo dhadhan badan Linux oo waa doorasho fiican qalabka OS oo dhan. "
Player 2: ciyaaryahan KM
KM Player waa doorashada la yaab leh haddii aad rabto inaad la ciyaari 3GP videos ama filimada ku saabsan qalabka Windows.
Tani waa ciyaaryahan video aad u miisaanka yar oo wejiyo badan oo ay taageertaa qaabab kale oo dhowr ah oo ay ka mid AVI, ASF, wmv, AHV iyo FLV iwm sidoo kale.
Maxaa ka dhigay waxa loo jecel yahay xaqiiqda ah in ay tahay mid aad u customizable iyo Nuur khayraadka.
Waxaa furan madal il kaas oo sidoo kale xor u yahay inuu kala soo bixi oo isticmaal.
Review: "KMPlayer ku guuleystay in uu dhiso laftiisa sida loo jecel yahay doorasho iyo waxa uu abuuray daawadee xoog leh oo nafteeda."
Player 3: ciyaaryahan GOM Media.
GOM ciyaaryahan warbaahinta ayaa ka soo baxay in ay doorashada la yaab leh oo ah ciyaaryahan video ah oo badan oo dadka isticmaala Windows dunida oo dhan.
Waxa aan kaliya taageeraa 3GP format laakiin sidoo kale kuwo kale oo badan sida AVI, FLAC, MP3 iyo kuwa kale.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan ciyaaryahan tani waa xaqiiqada ah in ay bixisaa Customization cajiib ah oo waa mid fudud in ay ku shaqeeyaan.
Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo furan madal il oo taageera codecs badan iyo sidoo kale.
Taageerada qaabab badan oo ay ka mid yihiin MKV, 3GP, FLAC, FLV, AVI, Mpg iyo MPEG.
Review: "GOM Media Player waa ciyaaryahan warbaahinta doorasho fiican iyo karti leh haddii aad rabto inuu u ciyaaro files warbaahinta kala duwan ee aad Windows 10."
Potplayer weli waa ciyaaryahan kale oo video ah oo taageera qaabka 3GP oo waa ikhtiyaar u lihi haddii aad tahay Windows 10.
Maxaa ka dhigay ciyaaryahan gaarka ah waa in ay taageerto koob 3D iyo muuqaalada 3D u janjeedha.
Waxa kale oo ay awood u bixiya video cajiib ah oo tayo leh maqal iyo taageertaa badan oo codecs oo aad u baahan tahay inuu ciyaaro noocyo badan oo warbaahinta.
Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo il madal furan.
Taageerada qaabab dhowr ah oo ay ka mid yihiin MPEG, 3GP, FLAC, Mpg, FLV, AVI, AFS iyo qaar badan.
Review: "Haddii aad tahay qof ayaa waxaa dhan arkay in ciyaartoyda warbaahinta xorta ah iyo ma u baahan tahay mid ka mid ah oo cusub, waa in aad hubaal ka eegi kartaa cajiib ah daydo Potplayer."
RealPlayer waa lacag la'aan video ciyaaryahan qiime kaas oo lagu yaqaan awoodaha ay taageerto qaabab badan oo ay ka mid yihiin 3GP ay.
Barnaamijkan waxaa ku shaqeeya by ah engine warbaahin furan dahsoon yaqaan Helix iyo sidoo kale leeyahay version ah lacagta caymiska la heli karo iyada oo tiro badan oo ah qaababka.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay sidoo kale waxa uu leeyahay awoodaha video geeyo iyo sidoo kale fursad u dooxeen CD.
Review: "Tani ciyaaryahan video cajiib ah ayaa shaqooyin badan boosaska badan oo waa maktabad warbaahinta meesha aad maamuli kartaa oo dhan files soo bixi".
UMplayer waa ciyaaryahan madal cross multimedia oo taageera audio iyo video codecs badan iyo qaabab file iyo sidoo kale DVDs, VCDs, iyo hab-geeyo kala duwan
Waa ciyaaryahan warbaahinta sare oo tayo leh, taas oo loo isticmaali karaa in ay ku raaxeystaan ​​ma movies oo kaliya laakiin sidoo kale muujinaya TV oo kale noocyo badan oo video.
Waxa kale oo ay leedahay isku dhafan YouTube ciyaaryahan oo ka interface user skinnable.
Review: "UMplayer waa ciyaaryahan tayo leh hadana warbaahinta oo ka muuqan kara badan oo dheeraad ah ku iman kara. Hadda, waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada maqan iyo arrimaha loo maqli karo waxaa laga yaabaa in aad u weyn oo ka mid ah ganacsiga-off ah u isticmaala inta badan. "
Player 7: ciyaaryahan Windows Media
URL Download: http://windows.microsoft.com/en-IN/windows/windows-media-player
Windows Media Player waa codsi maktabadda ciyaaryahan multimedia madal cross oo warbaahinta ah kaasoo loo isticmaalo ciyaaro audio iyo video iyo sidoo kale images arkaysid ee kombiyuutarada shakhsi.
Waa media player tayo sare leh, kaas oo sidoo kale awood u leh inuu dooxi music iyo sidoo kale nuqul ka CD iwm
Ciyaaryahan warbaahinta waxaa lagu heli karaa sidoo kale ku Mac OS iyo nidaamyada kale ee qaliinka iyo.
Dib u eeg ka, PC Mag
Review ". Inkasta oo ay jiraan weli qaar ka mid ah shaqada in la sameeyo ka hor inta Microsoft Windows Media oo bilaabay Player 11 dhabta ah, waa xiiso badan oo dheeraad ah si ay u isticmaalaan ka badan ciyaaryahan kale oo warbaahinta, iyo sida awood leh"
URL Review: http://in.pcmag.com/windows-media-player-11/68111/review/windows-media-player-11
URL Download: http://www.allplayer.org/en/
Allplayer waa ciyaaryahan aad u xoog badan warbaahinta oo sida magacaba ka muuqata, ciyaari karo kaliya qaab kasta.
Allplayer waa fiican u ciyaaro madax video files oo aan ciyaari doonaa ciyaaryahanka video caadiga ah.
Muuqaal kale oo highlight of media player tani waa in ay taageerto subtitles iyo codecs badan.
Qaar ka mid ah qaababka ay taageerto waxa ka mid ah MPEG, FLAC, 3GP, AVI, Mpg, regelingen iyo kuwa kale.
Review: "Allplayer u taagan oo ka soo baxay ciyaartoyda free kale mahad fursadaha ay Cinwaan ka xoogbadan. Waxa kale oo ay bixisaa khariidad ah dib-u-taariikhda iyo ciyaara wax walba, laakiin waxa dhab ahaan uga fiican ee video Cinwaan "
URL Review: http://download.cnet.com/AllPlayer/3000-13632_4-10876375.html
Player 9: Total Video ciyaaryahan
URL Download: http://total-video-player.en.softonic.com/
Total ciyaaryahan video Waa ciyaaryahan run ahaantii universal warbaahinta oo taageera videos oo loo maqli audio iyo waxay bixisaa fursado badan ek'eysiiyo.
Kaliya ciyaaryahan Tani ma taageertaa 3GP format laakiin sidoo kale qaar kale oo badan oo ciyaaryahano dhowr ah inta badan ma taageeri aadan.
Mid ka mid ah wax ka dhigaya ciyaaryahanka this marka laga reebo taagan yahay inta kale waa xaqiiqda in ay tahay mid aad u fudud in ay isticmaalaan.
Review: "Total Video Player waa ciyaaryahan xor ah warbaahinta ugu video iyo files audio dadka intooda badan waxay u baahan yihiin si ay u awoodaan inay ku ciyaaraan, iyo sidoo kale CD-yada iyo DVD-yada ciyaari karo."
URL Review: http://download.cnet.com/Total-Video-Player/3000-2139_4-10552696.html
Player 10: ciyaaryahan Media AHV
Name: AHV ciyaaryahan Media
URL Download: http://avs-dvd-player.en.softonic.com/
AHV Media ciyaaryahan taageertaa oo ka shaqeeya si wanaagsan ku Windows 10 interface.
Waxa ay taageertaa kala duwan oo badan oo qaabab iyo bixisaa audio cajiib ah oo tayo video.
Muuqaal kale oo ah ciyaaryahan warbaahinta tani waa in ay ka mid badhan anfacaya toobiye ay gubaan files.
Review: "AHV Media Player kuu ogolaanaysaa inaad ciyaaro heeso iyo filimaan badan oo qaabab iyada oo interface ah xarrago leh."
URL Review: http://download.cnet.com/AVS-Media-Player/3000-13632_4-10977094.html
Mac OS waa Apple ee dadaalka badan OS u Macbook iyo qalab kale oo gaar ah iyo sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan oo doorbiday adduunka. Waxaa jira qaar ka mid ah warbaahinta ama fursadaha ciyaaryahan video aad u isticmaali karto ee Mac laakiin oo kaliya wax yar oo ka mid ah ay u taageeraan qaab 3GP. Kuwa soo socda waa 10 ciyaaryahan 3GP sare ee Mac.
Wondershare Ciyaaryahan waa ultrafast, caaqil, nidaamsan oo heer sare ah oo isu video ciyaaryahan oo gebi ahaanba ka ciyaari kara nooc kasta oo videos.
Waa ciyaaryahan heer sare ah warbaahinta functional oo waxtar leh kaasoo ka shaqeeya Mac OS Windows iyo taageertaa iyo ku dhowaad dhammaan codecs.
Tani waa mid aad u fudud in la isticmaalo iyo tayada bixisaa HD Express.
Review: "Player Wondershare waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan oo ugu awood badan ciyaartoyda video halkaas oo aad ku raaxaysato movies oo dhan hab masrax-sida ogolaanaysaa.
Developer: Mashruuca MPlayer ayaa
URL Download: https://www.mplayerhq.hu/design7/news.html
MPlayer waa software free oo furan madal il oo waa laga heli karaa nidaamyada hawlgalka ugu iyo taageerada 3GP on Mac.
Waa ciyaaryahan caan ah oo boosaska badan taas oo uu leeyahay versions xataa qalabka sida Amazon shidin.
Ciyaaryahanka 3GP Tani waxay taageertaa ah qaababka badan oo kala duwan oo u baahan ma codecs dibadda si ay u shaqeeyaan.
Waxay leedahay interface aasaasiga ah weli mid aad horyalka Talyaaniga.
Review: "wax walba oo ku saabsan MPlayer 3GP ciyaaryahan Mac ka shaqeeya. Idinkuna ma waxaad ka heli wax ka khayr badan ciyaaryahan warbaahinta iyo waxa u hubiso waa in ay noqdaan doorashada aad ka doorteen. "
Ciyaaryahanka VLC Media weli fursad kale oo fiican haddii aad raadinayso ciyaaryahan 3GP ah Mac.
Waxaa hubaal waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee cross-madal oo kala duwan qaabka ciyaartoyda warbaahinta iyo yimaado iyada oo taageero codec buuxa.
Tani waa ciyaaryahan tayo sare oo ka shaqeeya hab fudud iyo yimaado lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Waa il madal furan.
Qaabab ay taageerayaan: WMA, wmv, 3GP, MOV, MPEG, cancer, AFS, AVI iwm
Review: "VLC Player waa ciyaaryahan 3GP wanaagsan la format.vob iyo waa waa in uu leeyahay qof kasta oo leh Mac ah".
Player 4: ciyaaryahan Windows Media
URL Download: http://windows-media-player-mac.en.softonic.com/mac
Windows Media Player waa codsi ah maktabadda tayada cajiib ah cross madal ciyaaryahan 3GP iyo warbaahinta, taas oo kuu ogolaanaya in aad u ciyaaro ma videos kaliya oo music laakiin sidoo kale si aad u eegto images on kombiyuutarada.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay sidoo kale waa awood dooxeen CD iyo music gubanaya iyo tani waa wax yeela mid ka duwan dadka kale ee halkaas.
Ciyaaryahan warbaahinta waxaa lagu heli karaa sidoo kale ku Mac OS iyo koriyo videos sare oo tayo leh.
Review: "Waxaa laga yaabaa in ay run in ay jiraan qaar ka mid ah shaqada ka tagay in la sameeyo ka hor inta version xiga ee ciyaaryahankaan, laakiin weli waa mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ugu fiican halkaas."
Player 5: Total Video ciyaaryahan
URL Download: http://download.cnet.com/Total-Video-Player/3000-13632_4-76209528.html
Total ciyaaryahan video waa ciyaaryahan cajiib ah warbaahinta iyo cross-madal taas oo universal ee dareenka ah in ay taageerto videos oo loo maqli audio iyo waxay bixisaa dhowr qaababka kale.
Tani waa fiican u ciyaaro 3GP videos on Mac OS oo waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan.
Total ciyaaryahan video kale oo ay taageertaa codecs badan iyo sidoo kale fursad u of video hoorto internet ka.
Review: "Total Video Player waa bilaash ah ciyaaryahanka warbaahinta qiimaha taageeridda qaab 3GP oo inta badan video iyo files audio dadka intooda badan waxay u baahan yihiin si ay u awoodaan inay ku ciyaaraan, iyo sidoo kale CD-yada iyo DVD-yada ciyaari karo."
Player 6: ciyaaryahan Free Mac Blu-Ray
Name: ciyaaryahan xor ah Mac Blu-Ray
URL Download: http://free-mac-blu-ray-player.en.softonic.com/mac
Free Mac ciyaaryahan Blu-ray software waa barnaamij boosaska badan oo u sahlaya kuwa isticmaala in ay ciyaari Blu-ray folder disc / Blu-ray / Blu-ray ISO image files.
Ciyaaryahanka Waxa kale oo isticmaala si aad u daawato videos HD 1080p iyo wax kasta oo kale oo ah qaabab video caan ah oo ay ka mid yihiin 3GP la video tayada ugu wanaagsan
Waxa ay taageertaa dhowr codecs aadan si ay u baahan tahay in aad isticmaasho kuwa wax dibadda iyo waa si dhab ah u diro daafaca.
Waxay leedahay interface horyalka Talyaaniga u qalab sida iminka sida Mac.
Review: "Free Mac Blu-ray Player for Mac u fududaynaysa aad u ciyaaro cajalladaha Blu-ray oo caan ah oo kale video files. Loo maqli karo ayaa balan qaaday waa mid aad u macaan oo lacag la'aan ah ka nooc kasta oo ay negaansho helaan. "
URL Review: http://download.cnet.com/Free-Mac-Bluray-Player/3000-13632_4-75891746.html
Name: Player Real
Waa saxaafada madal ciyaaryahan app karoos waa la jaan qaada qaabab file weel kala duwan
App yimaado buuxiyey oo la soo diyaariyeen mid ah qaababka sida animations garaafyada, kontaroolada video, duubista, dooxeen CD iyo kuwa kale
Waxa kale oo jira Converter ah warbaahinta oo awood si loogu badalo video ah in qaab sax ah
App user u saamaxaaya in ay boostada videos ay si toos ah u Twitter iyo Facebook
qaabab ay taageerayaan, 3GP, MPEG, DVD, AVI, Windows Media, Quick Time iyo kuwa kale.
Dib u eeg ka: Softonic
Dib u eeg: app waxay soo bixi kartaa durdurrada oo ku yimaadda buuxiyey oo la soo diyaariyeen mid ah qaababka. Waxa kale oo ay leedahay video Converter dhisay-in la taageero qalab kala duwan.
e Url dib u eegis The: http://realplayer-gold.en.softonic.com/mac
Waxaa la oran karo waa ciyaaryahan Combo multimedia in ciyaari karo filimada ray Blu iyo sidoo kale cajalladaha DVD ah
Ciyaaryahanka taageertaa video loo maqli karo ilaa 1080p
Interface ee ciyaaryahanka waa sac oo qurxoonayd oo si degdeg ah oo kasoo muuqday goobaha dareen
Ciyaaryahanka ayaa sidoo kale fursad u hawlgelinta wax soo saarka iyada oo maqal ah HDMI oo awood user in ay ku xidhmaan laptop in TV dibadda si fudud
qaabab taageeray: MP4, MP4 HD, MKV, 3GP, FLV iyo kuwa kale
Review: Waa ciyaaryahan fiican hadana taas oo si degdeg ah oo kasoo muuqday interface oo quruxsan oo taageero file wanaagsan. Maamulka File la'aan iyo qaababka loo maqli disc caadiga ah waa qaar ka mid ah khasaaraha la xiriira ciyaaryahanka.
Url dib u eegis The: http://download.cnet.com/Leawo-Blu-ray-Player/3000-13632_4-75914628.html
Player 9: DivX u Mac
Name: DivX u Mac
Waa mid ka mid ah ciyaaryahanka ugu caan ah Mac in ay taageertaa qaabab file badan
Ciyaaryahanka ayaa ku soo beegmay iyada oo tafatir danohooda fursadaha diinta
Ciyaaryahanka waa cayishay, fududahay in la isticmaalo iyo yimaado buuxaan hawlaha loo baahan yahay heerka
Muuqaalada DVD Advanced sida Cinwaan, selectipon goobta iyo kuwan raadkaygay audio kale ah ayaa sidoo kale ay taageerayaan ciyaaryahanka.
qaabab taageeray: DivX, AVI, Xvid, MKV, MOV, MP4, HEVC iyo kuwa kale
Review: Ciyaaryahanka waa mid ka mid ah ugu danbeeyay ee Mac madal oo kala Timid fursadaha tafatirka iyo diinta ka dhigaya Intaa waxaa dheer weyn oo qalabeed ee Mac.
Url dib u eegis The: http://download.cnet.com/DivX/3000-13632_4-21829.html
Taageerada ciyaaryahan audio iyo video qaabab kala duwan iyaga oo aan diinta
Waxaa yimaado oo la dhisay-in browser web u ogolaanaya in ay si toos ah u daawadaan muuqaalka
Ciyaaryahanka ayaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan playlist iyo maarayn iyo iyaga iyo sidoo tirtirto
Ciyaaryahanka ayaa interface dareen leh oo kuu ogolaanaya in aad ka raadin ururinta by arkaysid horyaal ee qaybaha
qaabab taageeray: FLV, Jabbuuti, XAP, dhexena iyo RV, AVI, MOV, MP4 iyo kuwa kale
Review: Waa xal dhamaystiran u ciyaaro kala duwan ee video iyo warbaahinta kale ee files. Ciyaaryahanka ayaa ku soo beegmay iyadoo browser dhisay-in ay tahay mid ka mid ah muujinta ugu haboon oo uu leeyahay navigation ogaado.
Url dib u eegis The: http://download.cnet.com/Elmedia-Player/3000-2139_4-75985205.html
macruufka OS ayaa soo baxday in mid ka mid ah nidaamyada hawlgalka aan aadka u isticmaalno, oo caan ah oo si fiican u yaqaan in adduunka. Waa qaab multi-shaqayn heer sare ah user saaxiibtinimo oo ka shaqeeya ma ahan oo keliya ee telefoonada iyo murriyado, laakiin sidoo kale ciyaaryahano music iyo qalab kale. App dukaanka ay ka kooban tahay malaayiin Chine, ka mid ah oo badan ayaa ka go'an in ciyaartoyda warbaahinta. Kuwa soo socda waa liiska 5 3GP Players hogaanka u app iPhone / iPad:
VLC Media ciyaaryahan ayaa ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ugu doortay milkiilayaasha qalab macruufka ah ma ahan oo keliya sababtoo ah waa cross-madal laakiin sidoo kale taageertaa qaab 3GP.
Waa ciyaaryahan isha xor ah oo furan taas oo uu leeyahay qaab aasaasiga ah oo ah mid deggan ee dabiiciga ah.
Sababta oo ah waxa fudud khayraadka iyo dabacsan yahay, waxaad ku raaxeysan kartaa filimada iyo qaar badan oo kale oo gogo 'oo saxaafadda ay ku saabsan qalabka aad mobile.
Review: "VLC Media Player waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican video ee macruufka iyo yimaado kontaroolka onscreen weyn, siyaabo badan oo ay ku geliyaan warbaahinta iyo taageero labada WordPress iyo Google Drive."
PlayerXtreme Weli waa fursad kale hogaanka ciyaaryahanka video ah leh 3GP oo loo isticmaali karo milkiilayaasha qalab macruufka ah.
Tani waa ciyaaryahan warbaahinta awood iPad oo taageera codecs badan oo koriyo video tayo sare iyo maqal ah.
Waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha, il furan oo aan u baahan tahay si loogu badalo qaabab ku yaal.
Review: "PlayerXtreme waa video ciyaaryahan sarre oo tayo leh oo waa istaahilaa iPad u quruxbadan oo ah mid ka mid ah oo aad jeclaan lahaa in aan doonayo inaan ka maqnaado korkiisa."
Name: ciyaaryahan Buzz
Developer: Vietnam software mobile co.ltd
URL Download: https://itunes.apple.com/in/app/buzz-player-hd/id559707039?mt=8
Ciyaaryahanka Buzz HD waa ciyaaryahan multimedia taageeraya qaabab dhowr audio iyo video codecs iyo file ah.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay taageertaa 3GP iyo sidoo kale taageertaa ikhtiyaarka geeyo.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waa app ah bixiyo app dukaanka Lugood iyo taageerada loo maqli HD buuxa.
Dib u eeg ka: Ogow mobile aad
Review: "tijaabadooda Player maamushaa wax loo feature weyn dhigay galay app aad u alaabada, kuwaas oo qaadataa Mudanayaasha yar iyo aqoonta user kasbashada hab maamuuska u dhigay oo dhan music iyo videos in aad jeebka."
URL Review: http://www.knowyourmobile.com/apps/12987/buzz-player-review
URL Download: https://itunes.apple.com/in/app/video-stream-watch-movies/id342124650?mt=8
Durduri Video waa ciyaaryahan bixisay warbaahinta oo taageera qaab 3GP oo ah mid ka mid kaas oo bixiya tayo HD isha.
Waxay bixisaa taageero account badan, kid amaan ilaalinta gaarka ah iyo taageerada daawashada fog ka badan 3G.
Qaabab ay taageerayaan: XMA, wmv, WMA, 3GP, AFS, AVI, MPEG, Mpg iyo kuwa kale.
Dib u eegista ka: AppAdvice
Review: app durdurrada videos ka computer si aad iPad iyo taageeray xisaab user si loo xaddido helitaanka fayl yar. Markaa hadii aad rabto in aad filimada heerka R oo ka fog carruurta, waxa ay noqon doontaa feature weyn. Waa tartan wanaagsan adeegyada kale geeyo.
URL Review: http://appadvice.com/appguides/show/best-ipad-movie-streaming
Player 5: Azul - File Manager & Video Player u iPhone
Name: Azul - Maareeyaha File & Video Player u iPhone
URL Download: https://itunes.apple.com/us/app/azul-file-manager-video-player/id406845187?mt=8
Ciyaaryahan warbaahinta waxa uu yimid iyadoo ciyaaryahanka hidi warbaahinta kaas oo kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi Gurtida aad jeceshahay iyo videos meel kasta.
Media player Azul aad caawisaa oo kuu ogolaanaya in aad sii qulquli videos aan lagala.
Waxa ay taageertaa qaabab badan oo ay ka mid yihiin 3GP iyo shuqullada ku macruufka.
Dib u eeg ka: Macrumours
Review: "HTTP Aad u fiican (Web) awoodaha download la taageero si ay u pages badan video Web caan ah."
URL Review: http://forums.macrumors.com/threads/azul-media-player-is-it-indeed-the-best.1552587/
Android waa mid ka mid ah ugu weyn oo ugu caansan nidaamyada hawlgalka adduunka. Oo waa hadiyad loo isticmaalo oo ay malaayiin qalabka adduunka iyo dukaan ay app waxay bixisaa video yaab badan oo ciyaartoyda 3GP. Laakiin kaliya wax yar oo ka mid ah waa run ahaantii wanaagsan. Liiska 5 ciyaartoy 3GP hogaanka qalabka Android soo socda waa.
VLC Player waa il furan, ciyaartoyda saxaafad xor ah oo dabacsan qalabka Android.
Waa ciyaaryahan heer sare ah customizable oo waa fudud yahay khayraadka iyo soo qaadan oo aan wax badan oo meel qalabka Android aad.
Waxaa ka ciyaari kara HD iyo BluRay iyo tani waa wax ka dhigaya gaar ah.
Qaabab ay taageerayaan: MPEG, FLV, FLAC, 3GP, AVI, RMBV iyo qaabab kale oo badan
Review: "VLC for Android waa boosteejo ah oo mid ka mid ah ugu wanaagsan ee nidaamka qalliinka tan u fiican. Ciyaartoy tiro yar, oo lacag la'aan ah ama lacagta caymiska, loolan la samayn kara awoodaha iyo taageero "
BS Player waa lacag la'aan app kharashka ama media player adag ee Android oo bixisa qalabka la dedejiyey video loo maqli karo.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay ka heli subtitles si toos ah iyo taageerada dibadda iyo subtitles gundhig.
Waxay bixisaa durdurraa ka badan audio kasoo muuqdo sidoo.
Qaabab ay taageerayaan: WMA, wmv, AFS, 3GP, AVI, MPEG, Mpg, MOV, cancer iwm
Review: "BSPlayer waa ciyaaryahan heer sare ah warbaahinta configurable laakiin waxa kale oo aad isla markiiba ka mid ah sanduuqa bilowga isticmaalkiisa ku dhawaad ​​qaab video ama file."
Ciyaaryahanka Dice waa HW ah dardargalinta ciyaaryahan video oo la Timaadda gacanta xawaaraha loo maqli karo iyo taageero network.
Ciyaaryahan warbaahinta Tani waxay taageertaa codecs ugu iyo bixisaa taageero Cinwaan.
Waxay bixisaa qaababka kale oo badan oo ay ka mid yihiin la saxo garoonka audio iyo raad badan audio.
Review: "warbaahinta ama video ciyaaryahan Tani ma run ahaantii si habsami leh uga shaqeeyaan qalab kasta, laakiin markii ay shaqayn, markaas waa fursad weyn u dib ciyaaro files MKV qeexitaanka sare".
Baal waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu warbaahinta ugu fiican ee Android oo taageera qaab 3GP iyo sidoo kale waa la jaan qaada tiro ka mid ah qaabab kale.
Waa ciyaaryahan heer sare ah oo deggan iyo customizable video ah oo uu leeyahay interface ah oo quruxsan.
Waxa kale oo ay bixisaa feature abuurka playlist oo uu yar yahay iyo miisaanka.
Qaabab ay taageerayaan: WMA, MPEG, 3GP, wmv, MPEG, AFS, AVI, FLAC, bartamaha, Ota, rtx iwm
Review: "Guud ahaan, waa baal video iyo music ciyaaryahan yar. Waxa uu helo shaqo iyo ma idin ka shuqlinin farabadan of muuqaalada oo aadan u baahan. "
URL Review: http://www.androidauthority.com/feather-review-533002/
Player 5: arkay Player HD
URL Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=vidon.me.pad&hl=en
Aoo waa 100% xor ah iyo sidoo kale ad lacag la'aan ah
Waxa ay taageertaa badan oo qaabab video iyo sidoo kale codecs
App ayaa qoreysa geeyo of videos ka server FTP ah, Samba, daaqadaha la wadaago adeega, DLNA iyo NAS
Ciyaaryahanka ayaa ka ciyaari kara HD videos ilaa 1080p
Waxaa jira gacanta ku tilmaam dhalaalaya, si degdeg ah weeraryahanka, u socdeen iyo mugga.
Qaabab: MP4, wmv, MOV, AVI, MKV, RMVB, 3GP, Mpg, dhexena, ASF, F4V, FLV, h264, QuickTime, XVID, DIVX iyo kuwa kale
Dib u eegista ka: appannie
Review: Iyada oo 3.5 rating, waa app wanaagsan in uu yahay lacag la'aan ah oo ay taageertaa qaabab faylka kala duwan.
URL Review: https://www.appannie.com/apps/ios/app/vidon-player-hd/
> Resource > Top List > Top 30 3GP ciyaaryahan ee Windows / Mac / macruufka / Android